Nin Soo Dilay Sarkaal Katirsan Ururka Al Shabaab oo Lagu soo Bandhigay Magaalada Jowhar (VIDEO)
December 14, 2016 – Saraakiisha dowladda ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa soo bandhigay Laba nin oo shacab ah, kuwaas oo la sheegay inay tuulo katirsan Gobolka Shabellaha Dhexe ku soo dileen Sarkaal Ururka Al Shabaab ka tirsanaa, ka dib markii ay ka dhiidhiyeen culeys uu ku haayay dadka deegaanka.
Sarkaalkan, ayaa waxaa lagu dilay Deegaanka Ceeldheere Barsane, oo 50km u jirta Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabellaha Dhexe.
Labadan nin oo soo gaaray Magaalada Jowhar, ayaa waxaa lagu soo bandhigay Saldhiga Booliska ee magaalada Jowhar, iyagoona sharaxaad ka bixiyay sababta ay ninkaasi u dileen.
Ibraahim Aadan Macalin oo ka mid ah labada nin ee dishay Sarkaalkan, ayaa sheegay Sarkaalkaasi lagu magacaabi jiray C/raxmaan Raaxoole, in uu dadka deegaanka marar badan ka qaaday wixii ay haysteen, markii dadkii ay cabasho badan ka keenayn arinkaasi ayysan jirin cid wax ka qabatay cabashadooda.
Ibraahim Aadan Macalin, ayaa Sarkaalka ay dileen ku eedeeyay in uu ku amar taakuleyn jiray bulshada ku dhaqan Deegaanka Ceeldheere Barsane, ayna soo dedejisay tallaabada ay ku qaarajiyeen sarkaalkaasi shabaabka u qaabilsanaa deegaankaasi.